Raha oharina tamin'ny taona teo aloha, ny tsenan'ny fitaovam-panorenana trano tamin'ny taona 2021 dia nandalo fiovana manozongozona ny tany. Nahita fisalasalana be loatra ireo mpandraharaha ara-barotra, ary toa mihamafy izany fiovana izany. 1. Ny fiarovana ny tontolo iainana dia ho lasa fefy henjana: Na avy amin'ny firenena...
1. Niakatra be ny vidin'ny akora Hatramin'ny nanamafy ny politikan'ny fampihenana ny herinaratra tamin'ny volana septambra dia nihena be ny famokarana ferronika tao an-toerana. Ny volana oktobra dia mbola lehibe ny elanelana misy eo amin’ny famatsiana herinaratra sy ny tinady any amin’ny faritra samihafa. Nanitsy ny famokarana ny orinasa nikela...
Nanomboka tamin'ny Septambra, niparitaka tany amin'ny faritany maherin'ny folo ny tranganà fahatapahan-jiro ao an-tokantrano ao anatin'izany ny Heilongjiang, Jilin, Guangdong ary, Jiangsu. Ny tolakandron'ny 27 septambra dia nanambara ny State Grid Corporation of China fa manoloana ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao dia haka ny ...